छायो दसैं सामाजिक सञ्जालमा [facebook][twitter][meropost] | OB Media
Our Biratnagar | १४ आश्विन २०६८, शनिबार १६:४९
‘बिहानीले उज्यालोलाई पर्खदै अन्धेरी रातमा रुमलिए पनि, झरनालाई नियालेर तिर्खाईमा तड्पिए पनि, साहसको बाटो परिवर्तन नहोस्, यात्रा निरन्तर चलिरहोस..... हुरीबतासको लहर जति नै बेगले चले पनि, कर्मको दियो अटुट बलिरहोस । यहि छ मेरो भावना, विजया दशमीको तपाई हामी सम्पूर्णमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!’
‘वाह! कस्तो मजाको शुभकामना लेखेको’ भनि मेरो प्रशंसा गर्ने पाठक मित्र स्पष्टिकरण दिन्छु माथिका पंक्ति मेरा होइनन । मेरोपोस्ट नामक सञ्जालका मित्र सुभाषबाट सापटी लिएको हुँ ।
दसैंले छोएरै होला बजारको चहलपहल बाक्लिएको छ । चोकका केटाहरु पंडाल लगाएर वा मूर्ति सजाएर दुर्गा पुजा गर्ने तयारीमा व्यस्त छन् । शहर बाहिर जाने सवारीहरुको चाप थामिनसक्नु भएको छ । वर्षमा दुई पटक आउने दसैं एक पटक चैते अनि अर्को बडा दसैंको नामले परिचित छ । चैते दसैं भन्दा भव्य तरिकाले मनाइने विजया दशमीले हामीलाई छोइसकेको महसुस हामी दिन प्रतिदिन गरि रहेका छौ/अझ केहि हप्तासम्म गरिरहने छौ ।
सम्झना छ विगतको, स्कुले जीवनमा नयाँ वर्ष होस् वा दसैं आउन लाग्दा साथीहरुसँग फिल्मी हिरो हिरोइन्, रमणीय स्थानका तस्बिर अंकित पोस्टकार्डहरुमा ‘विजया दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना’ लेखेर आदानप्रदान गर्दथ्यौ । विस्तारै पोस्टकार्डको स्थान एसएमएसले लियो । मोबाइलमा रमेका हामीले एसएमएस मार्फत शुभकामना साटासाट गरेको केहि समय नबित्दै महशुस हुन थालेको छ, सामाजिक सञ्जालले माध्यम परिवर्तन गराएको छ । हुन त अहिले पनि एसएमएस पुरानो भएको छैन र पनि फेसबुक, ट्विटर अनि मेरोपोस्ट जस्ता सामाजिक सञ्जालले शुभकामना प्रसारको माध्यम नै परिवर्तन गरिरहेको छ । मैले लेखको सुरुमा प्रस्तुत गरेको फेसबुक स्टाटस झै शुभकामना पोख्ने लेखाईहरु निक्कै देखिन्छन् हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा । अरु भन्दा बढि लाइक अनि कमेन्ट पनि यस्तै पर्व विशेष समयसापेक्ष प्रस्तुतिले पाउने गर्छन पनि ।
समय पाउदा यसो मिसिनु पर्छ सामाजिक सञ्जालको संसारमा, साथीहरुको स्टाटसले दसैं छाएको संकेत गर्न थाल्छ । विराटनगरका पत्रकार मिनकुमार नवोदित लेख्छन् ‘दसैं काठमाडौको महलमा बस्नेलाई मात्र नआओस, जुम्ला र हुम्लामा बस्नेहरुको झुपडीमा पनि कुनै अवरोध बिना आउन सकोस्....’ । उनको स्टाटसमा दसैंले गरिबहरुलाई पिरोल्ने दुख समेटिएको छ । हर्षसँगै यस्ता पिडा पोख्ने माध्यम पनि बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल । लाखौको जमघट हुने चौतारी फेसबुकमा यस्ता स्टाटस लाखौकै संख्यामा हुत्तिरहेका छन् । ‘अरुलाई दसैं आएको बेला मलाई दसा आएछ । दिनभरी सिमेन्ट बालुवाको काममै ब्यस्त भईयो ।’ सिंगापुरमा बस्ने नेपाली बल्कोटे बिनेले आफ्नो पिडा पोख्दै लेखेका छन् फेसबुकमा । विदेशमा कामको चटारोले थिचिएका धेरैले यसरी आफ्नो पर्व व्यथा लेख्छन् अनि कोहि भने पर्वबिच पलाएको कुरिति अनि अधार्मिक मौलिकताको विरोधमा पनि आफ्नो औंला किबोर्डमा नचाउछन् । इटहरीका मेरा एक मित्र लासाङला आपाले औंला चलाए ‘आदर्णिय बुद्धिजिबी साथीहरु बिरोध तथा अपब्याख्या गरेको नभन्नु होला । अब कालीमातालाई मान्छे, पशु र पंक्षी भोग र बली दिएर भक्ति नबनौ । तनमन सफा राखेर पूजा गरौ , पुण्य कमाऔ । सबैलाई सम्मान गरौं’ | उनको यस स्टाटसमा पचहत्तर जना मित्रले सहमतिको लाइक गरेका छन् । उनको बिचारमा थप्दै उमेश निरौलाले थपेका छन् ‘बली प्रथाको अन्त्य गरि स्वच्छ संस्कृतिको सुरुवात गरौं’ ।
विदेशको व्यथा, स्वदेशको उमगं अनि गाउँको रमझम कतिले कोरे कतिले । सबैको सार्वजनिक थलो बनेको सामाजिक सञ्जालले पर्वहरुको उमंगमा झन् बढि तातिने गरेको छ । यसलाई कायम राखौ । दशैलाई सहि र सजग तरिकाले मनाउने प्रयास गरौं । अन्त्यमा आफ्नै फेसबुक स्टाटसको मोडिफाईड अंश छोड्दै ह्याप्पी दसैं ‘म त दसैं आएको हो कि होइन भनि छक्क परि रहेको छु , बजार निस्कदा हो झै लाग्छ , फेसबुक र ट्वीटरमा नि सेम फिलिङ्स तर कोठा पुग्दा होइन झै..... संगै बस्ने कोठाका भाइहरु दशै आएर घर तिर लागि सके मेरो लागि नआ हो कि के हो यो दशै ?’
नेपाल बजार हेर्नैलाई पनि आउछन् : मनोज विक्रम शाह